မွေးနေ့မှာ အလုပ်တွေကြိုးစားရင်း အားလုံးအတွက် လှူနိုင်တန်းနိုင် သာသနာတွေပြုနိုင်ပါရစေလို့ တောင်းဆုပြုခဲ့တဲ့ မေကဗျာ - Cele Gabar
မွေးနေ့မှာ အလုပ်တွေကြိုးစားရင်း အားလုံးအတွက် လှူနိုင်တန်းနိုင် သာသနာတွေပြုနိုင်ပါရစေလို့ တောင်းဆုပြုခဲ့တဲ့ မေကဗျာ
By ChilliPosted on April 8, 2022
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့ ဧပြီလ (၈)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး မေကဗျာရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်တဲ့နေရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာတော့ မေကဗျာက အသက် (၃၈)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ။
မေကဗျာကတော့ ဒီနေ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ “Happy birthday to me. အသက် ၃၈ နှစ်အထိ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးတဲ့မေမေကိုကန်တော့ပါတယ်။ကဗျာ့ကိုချစ်သောမိသားစု သမီးလေး ဒီနေ့ဒီအချိနိထိ လိုလေသေးမရှိဖြညိ့ဆည်းပေးတာ ဖြစ်ချင်တာမှန်သမျှလုပ်ပေးသောကွီး မားမား မမဘုတ် ကဗျာအနားအမြဲရှိပေးသောမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်များ ကို့ရဲ့လက်တွဲဖော်များ Fans များကိုရင်ထဲကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းသောစိတ်ဖြင့် အလုပ်တွေကြိုးစားရင်း အားလုံးအတွက် လှူနိုင်တန်းနိုင် သာသနာတွေပြုနိုင်ပါရစေလို့ ဆုတောင်းရင်း(၃၉) ထဲရောက်ပါပြီ။”မွေးနေ့ဆုတောင်းထားခဲ့ပါတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေထဲကမေကဗျာရဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း မေကဗျာ့အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
ေမြးေန႔မွာ အလုပ္ေတြႀကိဳးစားရင္း အားလုံးအတြက္ လႉႏိုင္တန္းႏိုင္ သာသနာေတြျပဳႏိုင္ပါရေစလို႔ ေတာင္းဆုျပဳခဲ့တဲ့ ေမကဗ်ာ
ပရိသတ္ႀကီးေရ ဒီေန႔ ဧၿပီလ (၈)ရက္ေန႔ေလးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီးေခ်ာေလး ေမကဗ်ာရဲ႕ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္က်ေရာက္တဲ့ေနရက္ျမတ္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးမွာေတာ့ ေမကဗ်ာက အသက္ (၃၈)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သြားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ။
ေမကဗ်ာကေတာ့ ဒီေန႔သူ႔ရဲ႕ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးမွာ သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန “Happy birthday to me. အသက္ ၃၈ ႏွစ္အထိ ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေပးတဲ့ေမေမကိုကန္ေတာ့ပါတယ္။ကဗ်ာ့ကိုခ်စ္ေသာမိသားစု သမီးေလး ဒီေန႔ဒီအခ်ိနိထိ လိုေလေသးမရွိျဖညိ့ဆည္းေပးတာ ျဖစ္ခ်င္တာမွန္သမွ်လုပ္ေပးေသာကြီး မားမား မမဘုတ္ ကဗ်ာအနားအၿမဲရွိေပးေသာမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္မ်ား ကို႔ရဲ႕လက္တြဲေဖာ္မ်ား Fans မ်ားကိုရင္ထဲကေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ေကာင္းေသာစိတ္ျဖင့္ အလုပ္ေတြႀကိဳးစားရင္း အားလုံးအတြက္ လႉႏိုင္တန္းႏိုင္ သာသနာေတြျပဳႏိုင္ပါရေစလို႔ ဆုေတာင္းရင္း(၃၉) ထဲေရာက္ပါၿပီ။”ေမြးေန႔ဆုေတာင္းထားခဲ့ပါတယ္။ CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေတြထဲကေမကဗ်ာရဲ႕ ပရိသတ္ေတြလည္း ေမကဗ်ာ့အတြက္ ေမြးေန႔ဆုမြန္ေကာင္းေတြေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
Previous post ပထမဆုံးရင်သွေးလေးလွယ်ထားရကြောင်းအသိပေးလာတဲ့ Jeon Hye Bin
Next post အခုချိန်မှာပိုခက်ခဲကြပ်တည်းနေတဲ့ သူတွေရှိနေတဲ့အတွက် ဒီအတောအတွင်း လက်ခံထားတဲ့ ပွဲတက်တွေအားလုံးကို သူ့ဘက်ကတရားဝင်ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်